12/24/12 ~ Myanmar Forward
ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
အဖွဲ့နှင့် ကချင်ပြည်နယ် နယ်စပ် ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနတို့အား ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်း အခမ်းအနားကို ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ(၂)၌ ကျင်းပရာ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ကချင်ပြည်နယ် ဒေသကြီး ကြပ်ရေးမှူး ဒုတိယ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်းအောင်က နတလ ဦးစီး ဌာနနှင့် WFP တို့ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေ မှုများ၊ Mr. Kai . Alexander. Roehm (Head of Program. Unit, WFP, Country ,Office) က ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် (PRRO- 2000299) ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၅ တွင် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြ ကြသည်။
တဦးချင်း သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် လိုင်စင်ကတ်များ စတင် ထုတ်ပေးလျှက်ရှိ
Posted by drmyochit Monday, December 24, 2012, under သတင်းများ | No comments
နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဇုန်များတွင် ဒေသခံ ကုန်သည်ငယ်များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် တဦးချင်း အနည်း ဆုံး သိန်း ၅၀ အထိ တင်ပို့၊ တင်သွင်းခွင့် ရှိသည့် သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် လိုင်စင်ကတ်များကို ဒီဇင် ဘာ ၁ ရက်နေ့မှ စ၍ ထုတ်ပေးလျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရေကြည်မြို့နယ် ပေါက်ပင်ကွင်း ကျေးရွာမှ တစ်ခါမွေး ၂ ဦး၊ ၂ ခါမွေး ၅ ဦး ရှင်မွေးလွန်း မိခင်
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပုသိမ်ခရိုင် ရေကြည်မြို့နယ် ဒိုးကုန်းကျေးရွာ အုပ်စု ပေါက်ပင်ကွင်း ကျေးရွာ၌ ဒီဇင် ဘာ ၁၇ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက မီးယပ်နှင့် သားဖွား သင်တန်း ဆင်း ဒေါ်မိဌေးက ကလေးအမြွှာ သုံးဦး ယော က်ျားလေး နှစ်ဦး၊ မိန်းကလေး တစ်ဦးတို့ကို အောင်မြင်စွာ မွေးဖွား ပေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ကျိုက်ထီးရိုးတွင်ကားသမားထံမှအတင်းအဓမ္မတောင်းယူသွားသော ငွေ ၇ သိန်းကို KNU အဖွဲ့ မှ ပြန်လည်ပေး အပ်
KNU ကမ်းဘဲခေါင်းဆောင်သည့်အဖွဲ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ကျိုက်ထီးရိုး တောင်တက် ယာဉ်တစ် စီးမှ အတင်း အဓမ္မတောင်းယူသွားသော ငွေ ၇ သိန်းကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် KNU အဖွဲ့မှ တာဝန် ရှိသူများက ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Posted by drmyochit Monday, December 24, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဆီးရီးယား နိုင်ငံက လက်နက်ကိုင်သူပုန်တွေ ထိန်းချုပ်ရာHama ပြည်နယ်Halfaya မြို့မှာ မုန့်ဖုတ်ဆိုင်က တန်းစီစောင့်နေတဲ့ သူတွေ အပေါ်ကို အစိုးရ တပ်တွေက လေကြောင်းက ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် လူကိုးဆယ်ကျော် သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ အတိုက်အခံ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသ မှော်စီစာ ကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်က ကျောက်စိမ်း လုပ်ကွက် တစ်ချို့ရဲ့ စွန့်ပစ်မြေ စာပုံတွေမှာ တနိုင်တပိုင် ရွှေတူးဖော်လုပ်ကိုင်နေသူ တွေကို ဒီကနေ့မ နက်က ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းအခြေစိုက် ရဲဝန်ထမ်း ၂၀ လောက်က လုပ်ကွက်တွေထဲကနေ မောင်းထုတ် ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း သိန်း ၂၀၀ လောက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရေစုပ်စက် ၁၁ လုံးကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခဲ့တယ်လို့ စုံစမ်း သိရ ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ သုခကာရီအသင်းမှ နှလုံးစမ်းသပ်စက် နှင့် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးများလှူဒါန်း
စစ်ကိုင်းမြို့သုခကာရီကျန်းမာ ရေးနှင့် လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ စစ်ကိုင်းမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ နှလုံး စမ်းသပ် စက်နှင့် မြွေဆိပ်ဖြေ ဆေးလှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က စစ်ကိုင်း မြို့လေး ကျွန်းမြေအုတ် ကျောင်းတိုက်၌ ကျင်းပပြုလုပ် သည်။ အခမ်းအနား၌ အသင်း ကြီး၏ နာယကလေး ကျွန်းမြေ အုတ် ကျောင်းဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဓမ္မပ်္ပီယာ လင်္ကာရကစစ်တိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံ ကြီး၌ လိုအပ်လျက် ရှိသည့် (ECG) နှလုံးစမ်းသပ်စက်နှင့် မြွေ ကိုက်လူနာများအရေးပေါ် အသုံးပြုကုသနိုင်ရန်အတွက် မြွေ ဆိပ်ဖြေဆေး များလှူဒါန်းပေးရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို သြ၀ါဒစကား ပြောကြားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က မြောက်ကိုရီယားက ပစ်လွှတ်ခဲ့သော အန်ဟာ-၃ တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွင် ၅၀၀ မှ ၆၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ထိပ်ဖူးတစ်ခု တပ်ဆင်ထားမည်ဆိုပါက ကီလိုမီတာ ၁၀,၀၀၀ အကွာအဝေးအထိ ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုသည်။ Posted on Dec 23 12 - 03:04 AM မြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည် အမေရိကန်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ဟုဆို မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ၎င်းတို့၏ တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်အား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်အထိ အဆင့်မြှင့်တင်မှု ပြုလုပ်ထားကြောင်း တောင်ကိုရီးယားက ပြောကြားလိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ သမ္မတ လုပ်မည် ပြောသည့်နေ့ တွင် ရွှေတိဂုံစေတီပေါ် လင်းတ နားခဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ လုပ်မည် ပြောသည့်နေ့ တွင် ရွှေတိဂုံစေတီပေါ် လင်းတ နားခဲ့ သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တနင်္သာရီ ဒေသတွင် သမ္မတ လုပ်မည်ဟု ပြောဆိုပြီးနောက် ခဏ အကြာ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၌ ညနေ ၄နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် လင်းတကြီးများ လာရောက် နားကာ နမိတ်ပြ ခဲ့ပါသည်။
မြောက်ကိုရီးယားက ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ဒုံးပျံ အစိတ်အပိုင်း တခုအရမာက်ကိုးရီးယားဟာ ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည် နည်းပညာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာတာကို တွေ့ရတယ်လို့ တောင်ကိုးရီးယား ကပြော ဆိုလိုက်ပါတယ်။
တည်ထားကိုးကွယ်မည့် ဝေရော စန ကျောက်စိမ်း စေတီတော်သည် အရွယ်အစား ကြီးမားသည့် အတွက် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ဖြစ်လာနိုင်
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အောင်မြေ သာစံ မြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိ သာသနာ့ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်း သဘင် ခန်းမ၌ ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ကျင်းပသည့် အမရ ပူရ မြို့နယ် မြင်းမှူး ကျေးရွာအုပ်စု ဆင်ရွာ ကွင်း အတွင်း တည်ထား ကိုးကွယ်မည့် ဝေရောစန ကျောက်စိမ်း စေတီနှင့် ကျောက်စိမ်း ဓမ္မာရုံ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်း အဝေးတွင် ကျောက်စိမ်းစတီနှင့် ကျောက်စိမ်း ဓမ္မာရုံ တည်ဆောက်ရေး နာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး သူရ ဦးမြင့်မောင် က ယခု တည်ထား ကိုးကွယ်မည့် ဝေရောစန ကျောက်စိမ်း စေတီတော်သည် ကမ္ဘာတွင် မရှိသေး ပါကြောင်း၊
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥပဒေကြမ်းတွင် ပြုပြင်ပယ်ဖျက်သင့်သည့် အချက်များ အများအပြားရှိနေ
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်အား ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဋ္ဌာနလက်အောက်မှ သီးခြားလွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ထားရှိနိုင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥပဒေကြမ်းအား နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းတွင် ပါဝင်နေသည့် အချက်များမှာ သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်နိုင် မည်ဆိုသည့် ဗဟိုဘဏ်၏ ရပ်တည်မှုအား ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးကော်မတီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သောင်းက ပြောပါသည်။အဆိုပါ ပြောကြားချက်အား ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ သေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်အပေါ် ကန့်သတ်မယ့် ဥပဒေသစ်တွေကို ဆန့်ကျင် သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့် အပြည့်အ၀ ရရှိရေး အဓိက လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အမျိုး သား ရိုင်ဖယ်အသင်းက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ မိုင်းခွဲခံ လန်နုတံတား ပြန်ဆောက်
Posted by drmyochit Monday, December 24, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ၏ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရသော မြစ်ကြီးနား-ထိန်ချုံး လမ်းပေါ်ရှိ လန်နု တံတားကို ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်လည် တည်ဆောက် လျက် ရှိကြောင်း ယင်းတံတား ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ရုရှား ဖျက်သင်္ဘော တစ်စီးသည် အီရန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Bandar Abbas ဆိပ်ကမ်းတွင် ကျောက်ချ ရပ်နားလျက် ရှိကြောင်း တီဟီရန် သတင်းစာက ဒီဇင်ဘာလ ၂ဝ ရက်ေ...န့တွင် ဖော်ပြခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ ရုရှား Marshal Shaposhnikov ဖျက်သင်္ဘောသည် အီရန် ဆိပ်ကမ်းတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ကျောက်ချ ရပ်နားခဲ့ကြောင်း အီရန် ရေတပ် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဌာနက ကြေညာခဲ့ ပါသည်။ အီရန် ဆိပ်ကမ်း၌ အဆိုပါ ဖျက်သင်္ဘော ကျောက်ချရပ်နား နေမှုသည် အီရန်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံ အကြား စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေး ခိုင်မာ အားကောင်းစေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း အီရန် ရေတပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hossein Azad က ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ရုရှားနိုင်ငံ အနေဖြင့် အီရန် နိုင်ငံသို့ စစ်ရေယာဉ်များ စေလွှတ်ရန် ဆန္ဒ ရှိမှုကို ဖော်ပြခဲ့ ကြပြီး အီရန်နိုင်ငံ အနေဖြင့်လည်း ကြိုဆိုရန် အသင့် ရှိသည်ဟု အီရန် ရေတပ် အကြီးအကဲ ရေတပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Habibollah Sayyari က ဖေဖော်ဝါရီ လတွင် ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း PressTV သတင်း ဌာနက ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
မူလတန်းကျောင်းက ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကလေးငယ်တွေ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်မျိုးကို နောက်နောင် မဖြစ်ပွားရအောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲစဉ်းစားတဲ့အခါ ဒီလို ပြဿနာကို ဖြစ်...ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာကြပါတယ်။ လူအများအပြားကို သေစေနိုင်တဲ့ လက်နက်ကြီး လက်နက်လတ်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ၀ယ်ယူနိုင်တာက ပြဿနာတရပ်ဖြစ်သလို စိတ်ရောဂါ အမျိုးမျိုး ကုသမှုကို လိုအပ်သူ တိုင်း အတွက် မရနိုင်တာကလည်း ပြဿနာ တရပ် ဖြစ်တယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်လိုကြောင်း မိုက်ကယ်အဲရစ်၏ ဇနီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် ဘာမှမလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အာဏာ မမက်မောကြောင်း ဝါဒဖြန့် ခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အာဏာရရှိရေးအတွက် သမ္မတဖြစ်ချင်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ တွင် ပြောလိုက်ပါတယ်။
တောင်တက် ကားများအား ငွေကြေးတောင်းခံ ခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက် ၍ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား ဂေါပက အဖွဲ့နှင့် တောင်တက်ကား အသင်း တာဝန်ရှိ သူတို့အား KNU မှ တာဝန်ရှိ သူများက ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် လာရောက်ဆွေးနွေး ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း ဂေါပက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံမြင့်၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
Foremost နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နို့လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းပူးပေါင်း ၍ နို့သောက်သုံးမှု မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ် ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရ သည်။ အဆိုပါ နို့သောက်သုံးမှု မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွင် ကျောင်း သုံးကျောင်း ရှိ ကျောင်းသားဦးရေ ၁ဝဝဝ ကို အပတ်စဉ် နို့ တိုက်ကျွေးနိုင် ရန် Foremost မှ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဟု သိရ သည်။
ယနေ့နံက်ပိုင်းမှ ညနေ (၆) နာရီအထိ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဌာနချုပ်အား စစ်ဆင်ရန် မြစ်ကြီးနား- လိုင်ဇာ လမ်းကြောင်းမှ စစ်ဆင်လာသော အစိုးရစစ်ကြောင်းများကို KIA ရှေ့တန်းတပ်များက တနေ့လုံး ခံတိုက်နေ သဖြင့် ရှေ့မတိုးနိုင်ဘဲ ရှိနေသည်ဟု KIA စစ်ရုံးအရာရှိတဦးက ဆိုပါသည်။
"မန်းတွင် အရစ်ကျစံနစ်ဖြင့်Taxi ကားများ ၀ယ်ယူနိုင်"
မန္တလေးမြို့တွင် Taxi ကားများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ၀ယ်ယူလိုလျင် အာမခံပေးသူ နှစ်ယောက်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၀ယ်မည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ရပ် ကွက်ထောက် ခံစာ၊ ရဲစခန်း ထောက်ခံစာများလိုအပ်ပြီး အာမခံပေးမည့်သူနှစ်ယောက်အတွက်လည်း အဆိုပါ အချက် အလက် များလိုအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း Taxi ကားအရစ်ကျရောင်းပေးမည့် Best Auto ကားအရောင်းဌာနမှ ဒုလက်ထောက်မန်နေဂျာ ဦးလှကျော်စွာကပြောသည်။
အများစု သိထားတာက ၂၀ ရာစုရဲ့  အကြီးမားဆုံး ရေကြောင်း အက်ဆီးဒန့် ဖြစ်တဲ့ တိုက်တန်းနစ်ဟာ နှစ်မြှုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တကယ် မနှစ်မြှုပ်ခဲ့ဘူး ဆိုတာကိုလည်း အင်ဂျင်နေယာ Robin Gardiner က သက်သေပြ ခဲ့ပါတယ်။
“သမီးကို မိဘတွေက ကျောင်းဆက် မထားနိုင်တော့တဲ့ အဖြစ် ဆိုတော့ လူပွဲစား ကလည်း ရပ်ကွက် ထဲမှာ ထိုင်းကို သွားပြီး အလုပ် လုပ်ဖို့ မက်လုံးပေး စည်းရုံး တာကို အိမ်က ယုံယုံ ကြည်ကြည်နဲ့ ထည့်လိုက် တာပါ။ စရိတ်ငြိမ်း ခေါ်လာတဲ့ အပြင် အိမ်ကိုလည်း ကျပ်တ သိန်းခွဲ ကြိုပေး ခဲ့တော့ အဲ့ဒီ် ကနေ အစပြုပြီး မဲဆောက်မှာ အရောင်းစား ခံရပြီး ဒ်ီဘ၀ကို ရောက်လာ ရတာပါ။
ယမန်နေ့ ၂၂ ရက်နေ့က ပါကစ္စတန် အနောက်မြောက်ဒေသ မြို့တော်ပီ ရှဝါမြို့တော်တွင် အသေခံ ဗုံးခွဲ သူ တစ်ဦး၏ လက်ချက်ကြောင့်…အနည်းဆုံး လူရှစ်ဦးသေဆုံး ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်…။